किन ‘दुश्मन’ बन्दै छन् नेपाली क्रिकेटका ‘जय र बिरु’को जोडी?
दीप सुवेदी शनिबार, असोज ९, २०७८, २०:१५
युवराज लामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्यसचिव हुँदा पारस खड्का र आमिर अख्तरको ‘जुगलबन्दी’ हेर्न लायक थियो। धेरैले उनीहरूलाई भारतीय सिनेमा ‘शोले’का दुई जोडी ‘जय र बिरु’ को उपमा दिन्थे।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का तत्कालीन अध्यक्ष विनयराज पाण्डेलाई संघबाट नेतृत्वच्यूत गर्न त्यो बेला पारस र अख्तरको जोडीको ठूलो हात थियो। यो प्रकरणबारे भलिभाँती जानकारहरुका अनुसार खेलाडीलाई आफ्नो ‘पैतालाको धुलो’ पनि नठान्ने र ‘व्यक्तिवादी अहंता’ बोकेको खलपात्रको रूपमा पाण्डेलाई नेपाली मिडियामा दर्शाउन यी दुवैले कुनै कसर बाँकी राखेनन्।
रोचक तथ्य, कुनै बेला नेपाली क्रिकेटमा ‘जय र बिरु’को जोडी मानिने यी पूर्वखेलाडी अहिले एकअर्काको ‘जानी दुश्मन’ बनेका छन्। र, सामाजिक सञ्‍जालमा यी दुवैका फ्यान एकअर्कालाई गाली गर्दै जगहँसाइ गरिरहेका छन्।
आमिर अहिले एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) को चौथो संस्करण आयोजना गर्ने क्रममा सर्वाधिक चर्चामा छन् (चौथो संस्करण शनिबारदेखि सुरु भएको छ)। विदेशी खेलाडी, विशेषतः नेपाली क्रिकेट प्रेमीमाझ निकै लोकप्रिय पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफ्रिदी इपीएलमा आवद्ध हुँदै दुई खेल खेल्न काठमाडौं उत्रिएसँगै आमिरको चर्चा चुलिएको हो।
तर, आमिर यो अवस्थामा आइपुग्न उनै पारसको सबैभन्दा ठूलो रोल थियो। सन् २०१४ मा नेपालले बंगलादेशमा टी-२० विश्वकप खेलेपछि पारसको पद र प्रतिष्ठा नेपाली खेलकुदमा उच्च स्थानमा पुगेको थियो। किनभने पारसकै कप्तानीमा नेपालले पहिलो पल्ट टी-२० विश्वकप खेलेको थियो। विश्वकपका दुई खेलमा जितसमेत हासिल गरेको थियो।
नेपाली क्रिकेटको वर्तमान अवस्था हेर्दा पारस खड्का क्यानको वर्तमान नेतृत्वको विपक्षमा उभिएका व्यक्ति हुन् भने आमिर अख्तर अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द समूहका ‘खास मानिस’ मानिन्छन्।
उनको लोकप्रियता भजाउँदै आमिरले टी-२० प्रतियोगिता गराउन नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रबाट मोटो रकम उठाएका थिए। प्रायोजकको ढोकाढोकामा पारसलाई बोकेर गएको तथा पत्रकार सम्मेलनमा पारस र ज्ञानेन्द्र मल्ललाई दायाँ र बायाँ राखेको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन। त्यो अहिले पनि नेपाली पत्र-पत्रिकाका कटिङ तथा टेलिभिजनका आर्काइभ फुटेज हेर्दा छर्लङ हुन्छ।
यति नजिकको सम्बन्ध हुँदाहुँदै आखिर पारस र आमिरको सम्बन्ध किन बिग्रियो? यो भने अहिले आमनेपाली क्रिकेटप्रेमीको लागि चासोको विषय बनेको छ।
क्यानले आफूले नियमित गर्नुपर्ने काम नगरिरहेको अहिलेको अवस्थामा आमिरको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन न्वारानदेखि लगाएको बल देखेर क्रिकेट विश्लेषकहरु पनि यतिबेला लज्जित बनेका छन्। खासमा भन्नुपर्दा चन्दको पनि ‘अध्यक्ष’ जस्तै यतिबेला आमिर देखिएका छन्।
क्यान नेतृत्व पछिल्लो दुई वर्षयता कोभिड-१९ लाई कारण देखाउँदै सुतेर बसेको छ। कुनै बेला नेपाली फुटबलभन्दा बढी सक्रिय नेपाली क्रिकेट अहिले लगभग धरासायी अवस्थामा पुगिसकेको छ।
डेभ वाट्मोर जस्ता हस्तीलाई श्रम स्वीकृति जस्तो सामान्य कुरामा अडाउन नसक्नु अहिलेको क्यान नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो। यही अवस्था कायम रहे नेपाली क्रिकेटको भविष्य कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
क्यानको यही विफलतालाई बुझेका पारसले केही महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट एक्कासी सन्यास लिँदै अब आफू नेतृत्वका लागि लड्ने उद्‍घोष गरेका थिए। वास्तवमा अहिलेको क्रिकेटको लडाइँलाई यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा सही हुन्छ।
हिजो पारसले कसलाई के भने? आमिरले के गरे? यी सबै तपसीलका कुरा हुन्। पारसलाई एनपीएल र इपीएलको ‘ब्राण्ड एम्बेसडर’ को तहमा कर्पोरेट हाउसको ढोकाढोका चहार्न लगाएर आमिरले पैसा कमाएको सत्य हो। यो सत्यलाई उनले हजारौं असत्य कुरा गरेपनि ढाकछोप गर्न सक्दैनन्।
पारसले राष्ट्रिय टोलीको कप्तान हुँदा ‘म नै संघ हुँ’ भन्ने जुन घमण्ड देखाए, त्यो पनि अर्को सत्य हो।
जसरी विनयराज पाण्डेविरूद्धको अभियानमा यो जोडी लाग्दा, ‘विनयराजले नमस्ते त फर्काउँदैन’ भन्ने उनीहरूको आरोप थियो। पछिल्लो समय यी दुवैको अहंकार पनि पाण्डेकै तहमा पुगेको प्रस्ट देखिन्छ।
पारसले क्रिकेटको नेतृत्व नछोड्दासम्म उनीविरूद्ध यस्तो आरोप लाग्ने गर्दथ्यो- पारसको घरमा पुगेर जुन खेलाडीले हाजिरी बजाउँदैनथ्यो, त्यो टिमबाट बाहिर हुन्थ्यो।
पारसमाथि लाग्ने यस्तो आरोपको सत्यताको परीक्षण आफ्नो ठाउँमा छ, आमिरको पनि बदलिएको हैसियत पुराना पुस्ताका खेलाडीलाई सोध्दा छर्लङ्‍ग हुन्छ।
यी सबै मुद्दाका बीच क्यानचाहिँ कहाँ उभिएको छ त? यो भने मुख्य र जटिल विषय हो। क्यान पदाधिकारीहरू आफ्नो संघको लोगो ‘गैंडा’ जस्तै सुतेर बसेका छन्। स्थानीयस्तरका प्रतियोगितादेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट प्रतियोगिता गराउन क्यानलाई आमिरको आवश्यकताबोध हुनु भनेको त्यसभित्र केही न केही कैफियत छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन।
अहिलेका क्यान पदाधिकारी न पारसको ‘कन्ट्रिब्युसन’ स्वीकार गर्ने पक्षमा छन्, न पारस वर्तमान क्यान नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा। यस्तोमा एउटा व्यक्ति नेपाली क्रिकेटको ‘फोकल प्वाइन्ट’ बन्ने अवस्था आउनु नेपाली क्रिकेटकै बिडम्बना हुनेछ।
टिकट बिक्रीदेखि प्रायोजक खोज्ने कार्य आमिरलाई सुम्पिएर क्यानको नेतृत्व अहिले के गरेर बसिरहेको छ? यो गम्भीर विषय हो। अझ रमाइलो कुरा, कीर्तिपुरको त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ‘फ्लड लाइट’ देखि पारापेट बनाइदिने आश्वासन आमिरले दिएका छन् भन्दै क्यान नेतृत्वले पिठ थपथपाइरहेको अर्को ओपन सेक्रेट हो।
नेपाली क्रिकेट चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा चल्न सक्दैन भन्ने आवाज क्यानभित्रैबाट उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा क्यानको आगामी निर्वाचन पेचिलो बन्ने पक्का छ। र, यो निर्वाचनमा आमिरको झुकाव कतापट्टि हुन्छ, त्यो विश्लेषण गर्न सजिलो छ।
डेभ वाट्मोर : मूर्छित सपना जगाउँदै थिए, क्यान नेतृत्वको अकर्मण्यताले टिक्न सकेनन्बिहीबार, असोज ७, २०७८
भारतलाई सन् १९८३ मा आफ्नो कप्तानीमा विश्वकप जिताएका कपिल देव भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को उपेक्षाका बीच २००७ मा आइसीएल (इन्डियन क्रिकेट लिग) मा आवद्ध भएका थिए। उनको त्यो हर्कतलाई बीसीसीआईले संघविरूद्धको कार्य ठहर गर्‍यो। र, उनको पेन्सनदेखि सबै कुरा रोक्का गरियो। पछि बीसीसीआईले देशप्रति उनको समर्पणको मूल्यांकन गर्‍यो र उनले पनि २०१२ मा आईसीएलबाट राजीनामा गरे। अहिले उनी भारतीय क्रिकेट बोर्डको अभिन्न अंग भएर काम गरिरहेका छन्।
नेपाली क्रिकेटमा भने व्यक्तिगत अहम्का कारण टकरावको स्थिति बनेको छ। जुन टकराव न खेलाडीको हितमा छ, न नेपाली क्रिकेटकै। अहिलेका क्यान पदाधिकारी न पारसको ‘कन्ट्रिब्युसन’ स्वीकार गर्ने पक्षमा छन्, न पारस वर्तमान क्यान नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा। यस्तोमा एउटा व्यक्ति नेपाली क्रिकेटको ‘फोकल प्वाइन्ट’ बन्ने अवस्था आउनु नेपाली क्रिकेटकै बिडम्बना हुनेछ।
दुई दशकदेखि जो विनातलब देशका लागि बास्केटबल खेलिरहेछन्
के देशका लागि खेल्ने नेपाली खेलाडीको तलब अति कम हो?
आफ्नै खर्चमा कुस्ती खेलाडी च्याम्पियनसिप खेल्न नर्वे पुगेको खुलासा
कात्तिक १५ गतेसम्ममा कर्णाली सरकार फेरिन्छः कांग्रेस नेता शाही बुधबार, कात्तिक १०, २०७८
एन्फा ‘राजनीति’को रोटी सेक्न अल्मुताइरीलाई कहिलेसम्म ‘मोहरा’ बनाइरहने? दीप सुवेदी
डेभ वाट्मोर : मूर्छित सपना जगाउँदै थिए, क्यान नेतृत्वको अकर्मण्यताले टिक्न सकेनन् दीप सुवेदी
दुई दशकदेखि जो विनातलब देशका लागि बास्केटबल खेलिरहेछन् आइतबार, कात्तिक ७, २०७८
ती हँसमुख रेफ्री नफर्किने गरी ढले सोमबार, असोज १८, २०७८
क्लबको दाउ ‘म्याच फिक्सिङ’, एन्फाको काम सामसुम बनाउने! बुधबार, असोज ६, २०७८